आधा केजी चामल राहत लिन मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा दैनिक लाइन लाग्नुपर्छ
मुख्य पृष्ठप्रदेश १आधा केजी चामल राहत लिन मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा दैनिक लाइन लाग्नुपर्छ
सोमबार, २२ वैशाख, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, २२ वैशाख । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले लकडाउनका लागि राहत भन्दै दैनिक आधा केजी चामल वितरण गर्न थालेको छ ।
गाउँपालिकाले सातवटै वडामा एक हप्तासम्म एक जनालाई दैनिक आधा केजी चामल वितरण गर्न थालेको हो ।
पहिलो चरणमा कटहरी गापले प्रति परिवार १० केजी चामल एकैचोटी दिएको थियो । तर राहतमा दुरुपयोग भएको भन्दै पालिकाले कार्यकारिणी बैठकबाट निर्णय गरेर दैनिक एक जनालाई आधा केजी चामल दिन थालेको हो ।
अब दोस्रो चरणको आधा केजी चालम लिन प्रत्येक घरका एक सदस्यले वडाले तोकेको बुथमा एक हप्तासम्म दैनिक लाइन लाग्नुपर्नेछ ।
कटहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले राहतको दुरुपयोग रोक्न सर्बपक्षीय सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार प्रति व्यक्त्ति दैनिक आधाकेजी चामल वितरण गर्न थालेको बताए ।
उनले भने , ‘ दैनिक चामल थाप्न जो आएपनि दिन्छौ गति छाडेमा आफै बेइज्ज्त हुनेछन् ।’
अध्यक्ष कामतका अनुसार प्रत्येक वडामा टोल टोलमा बुथ बनाएर प्रत्येक व्यक्त्तिलाई एक हप्तासम्म दैनिक आधाकेजी चामल वितरण गरिनेछ ।
वडा कार्यालयले बनाइदिएको परिवार संख्याको टोकन लिएर चामल लिन एक जना सदस्य मात्रै आए हुन्छ ।
भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले गरिबलाई मजाक बनाएको आक्रोश
यता राहतका नाममा पालिकाले प्रतिव्यक्त्ति दैनिक आधा केजी चामल दिएर हैरानी दिएको भन्दै गरिबहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
उनीहरुले कोरोनाको समस्यामा परेका गरिबहरुलाई आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई मजाकको पात्र बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त्त गरेका छन् ।
उनीहरुले आधा केजी चामलले कति दिन खाने बरु राहत लिनुभन्दा पानी खाएर बस्नु नै जाति भनेर राहत थाप्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
कटहरी गाउँपालिका १ टाइगर टोलकी धनसरिया देवीले आफ्नो छ जनाको परिवारले जनही आधाकेजी चामल मात्र पाउने र त्यसले एक दिन पनि नपुग्ने बताइन् । ‘ लकडाउन भएको लामो समय भैसक्यो, वडाले राहत वितरण गर्दैछ भनेर खुशी भएर आएको तर प्रत्येक व्यक्ति बराबर आधा केजी चामल रहेछ, यत्रो हैरानी पाउनुभन्दा त बरु पानी खाएर बस्नु जाति’ उनले भनिन् ।
दैनिक राहत वितरण गर्दा झन् जोखिम
टोकन वितरणसमेत राहत वितरण केन्द्रमा नै गरिएको छ । जसले गर्दा सामाजिक दुरी कायम समेत भएको छैन । भीडभाडबाटै टाढै रहन सरकारले लकडाउन गरेको छ । निनानुदिन संक्रमण बढ्दो क्रममा छ ।
तर राहत वितरण गर्दा सामाजिक दुरी कायम नगरी बाक्लो भीड लगाउँदा झन् समस्या निम्तने सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
तर यसको पालना हुन नसकिरहेको अवस्था छ । भीड नगरी लाइनमा बस्नु भन्दा नमानी भीड लगाएर बस्छन्, हामीले के गर्नु, जनप्रतिनिधि बाध्य छौँ वडा नं. १ का एक वडा सदस्यले भने । नत कसैले मास्क नै लगाएका छन् ।
हप्ता दिनसम्म दिनहुँ भीड लगाएर यसरी राहत वितरण गरिदाँ झन जोखिम बढ्ने स्थानीय कृष्ण तामाङ्गले बताए । भने , ‘त्रासको समय छ, संक्रमित बढिरहेको अवस्था छ, तर वडाले नै लापरवाही गरिरहेको छ । हप्तादिन सम्म आधा आधा केजी वितरण गर्नुको साटो एकैपटक दिएको भए के हुन्थ्यो ? उनले भने यो सबै वडाको नाटक हो ।’